घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » आगन्तुकहरु हवाई को लागी नयाँ यात्रा प्रतिबन्धहरुको सामना गरिरहेका छन्
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • सुरक्षा • किनमेल • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक व्यस्त यात्रा र पर्यटन गन्तव्य हवाई हो, को रूप मा जानिन्छ Aloha राज्य। लगभग ३०,००० दैनिक आगमन संग, होटलहरु भरिएका छन् र COVID-१ infections संक्रमण पहिले जस्तै कहिल्यै फैलिरहेको छ।
हवाई को लागी नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध (अपडेट गरिएको)
हवाई महामारी को शुरुवात देखि नै कोभिड संक्रमण को उच्चतम संख्या को माध्यम बाट जाँदैछ। यो उच्च संख्या तथ्य यो हो कि राज्य को जनसंख्या को .60.8०.%% लाई पूर्ण रुपमा खोप लगाइएको छ।
घरेलु आगन्तुकहरु को रेकर्ड संख्या मा हरेक दिन आइपुग्छ Aloha राज्य, होटल, पसल र रेस्टुरेन्ट भरि राखेर।
किन यति धेरै मानिसहरु हवाई भ्रमण गर्न चाहन्छन्। यहाँ सम्म कि हवाई पर्यटन प्राधिकरण थाहा छैन र शान्त रहन्छ, पर्यटकहरु लाई यात्रा गर्न को लागी हतोत्साहित गर्ने तरिकाहरु खोज्न को लागी कोशिश गर्दै Aloha राज्य।
COVID संक्रमण दरहरु वर्तमान मा छन् अमेरिकी हवाई राज्य मा नियन्त्रण बाहिर - र यो चिन्ताजनक छ।
"हामीले अब श्रम दिवस को माध्यम बाट हाम्रो केस गणना लाई साँच्चै कम गर्नु पर्छ, अन्यथा त्यहाँ एक अनावश्यक र दुखद ज्यान गुमाउने छ," ग्रीनले आज बिहान एक फेसबुक र इन्स्टाग्राम पोस्ट मा भने।
लेफ्टिनेन्ट गभर्नर ग्रीनलाई हवाई गभर्नर डेभिड इगेले प्रतिध्वनित गरे जसले संकेत गरे कि पाइपलाइनमा प्रतिबन्धको पुन: परिचय हुन सक्छ। उनले भने कि शुक्रवार सम्म एक घोषणा गर्न सकिन्छ। Expected प्रतिबन्धहरु लाई भेट्न को लागी अनुमति दिईएको संख्या लाई घटाउन सक्छ, घटनाहरु मा, समुद्र तटहरु, रेस्टुरेन्टहरु, र पसलहरु मा बाहिर झुण्डिएको।
सबैभन्दा खराब परिदृश्यमा, यसले स्थलहरुलाई फेरि बन्द गर्न बाध्य पार्न सक्छ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एक अपडेट को लागी र जान्न को लागी गभर्नर Ige ले निर्णय लिएको छ र भाइरस को संख्या लाई तल ल्याउन को लागी वर्तमान मा उपायहरु।
यो राज्य मा एक फस्टाउँदै पर्यटन उद्योग को लागी नराम्रो खबर हो। जबकि अन्तराष्ट्रिय यात्रा को लागी बन्द छ, आन्तरिक पर्यटन अब पूर्व कोभिड संख्या को तुलना मा उच्च भएको छ।
संक्रमण संख्या मा भारी बृद्धि संगै, मृत्यु दर अब सम्म कम भएको छ।
आइतबार एक व्यक्तिको मृत्यु भयो र ४३437 केसहरु रेकर्ड गरियो, र more जना अरुलाई अस्पताल भर्ना गरीयो अस्पताल भर्ना संख्या २9४ to मा ल्याईयो।
पछिल्लो हवाई COVID-19 खोप सारांश भन्छ 1,784,678 भ्याक्सिन खुराक राज्य र संघीय वितरण कार्यक्रमहरु को माध्यम बाट आइतवार सम्म प्रशासित गरिएको छ, शुक्रवार बाट १०,११10,118 सम्म। स्वास्थ्य अधिकारीहरु भन्छन् कि राज्य को जनसंख्या को .60.8०.%% अब पूर्ण खोप लगाइएको छ, र .68.3.३% ले कम्तीमा एक खुराक प्राप्त गरेको छ।
आगन्तुकहरु पास गर्न पर्छ सुरक्षित यात्रा कार्यक्रम हवाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइनु अघि।
Harlan Accola भन्छन्:
अगस्त २,, २०२० ० 22::2021
त्यसोभए तपाइँसँग टेक्सास को रूप मा संक्रमण को बिल्कुल उस्तै ढाँचा छ जुन लकडाउन र मास्किंग मा नाटकीय रूप बाट फरक छ - तेसैले तपाइँ यो एक फरक पार्छ जस्तो लाग्छ यदि तपाइँ अधिक प्रतिबन्धित हुन थाल्नुहुन्छ? सायद कसैले विज्ञान बुझ्नु पर्छ। हामी जनवरी को लागी हवाई मा एक ठूलो परिवार यात्रा रद्द गर्ने कगार मा छौं - त्यो २०,००० भन्दा बढी स्थानीय अर्थव्यवस्था मा हुनेछ - आश्चर्य छ कि कति अन्य मानिसहरु एउटै कुरा सोचिरहेका छन्?
किम्बर्ली मेले भन्छन्:
आउनुहोस् हामी सबै टेबलमा फिर्ता आऔं र हात धुने, र सेनिटाइजिंग मा फर्कन को लागी एक समग्र को रूप मा निर्णय गरौं तर अझ धेरै, अतिरिक्त सावधानी अपनाउने र दूरी कायम राख्न। नोट गर्न को लागी सही: आहार मा अधिक साग र जडी बूटी र मसाले पाउनुहोस्, सूर्य र व्यायाम मा पाउनुहोस्। एक अर्कालाई प्रार्थनामा राख्नुहोस्, र हामी हाम्रो जीवन ईश्वर को लागी पूर्ण सम्मान मा फिर्ता गरौं उहाँ को हुनुहुन्छ र भगवान लाई सोध्नुहोस् जसले आफ्नो छोरा येशु लाई हाम्रो लागी मर्न पठाउनु भयो, हामीलाई बचाउन को लागी। यदि हामी उहाँको सामु आफूलाई विनम्र तुल्याउँछौं, हाम्रा wi नेतृत्वको मार्गहरु बाट फर्केर उहाँको अनुहार खोज्छौं, तब उहाँ स्वर्ग बाट सुन्नुहुनेछ र हाम्रा पापहरु क्षमा गर्नुहुनेछ र हाम्रो भूमि लाई निको पार्नुहुनेछ। परमेश्वरको एकतामा मानिसको ठूलो भूमिका छ। भगवान आशीर्वाद अमेरिका ~ हवाई र पृथ्वी को सबै भागहरु।
यो सँगै लडौं
अल्ला Bugriyev भन्छन्:
अगस्त २,, २०२० ० 12::2021
प्रतिबन्धले मद्दत गर्दैन। हवाई धेरै महिना को लागी बन्द थियो र भाइरस अझै जीवित छ। अन्य भाइरस जस्तै। सुई वा मास्कले तपाइँलाई बिरामी हुनबाट रोक्दैन, स्वस्थ खाना र कसरत एक राम्रो काम गर्दछ ... तर साँचो हो, तपाइँको दिन भगवान द्वारा गिनीएको छ, कसैले आफ्नो जीवन लम्ब्याउन सक्दैन। उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ र उहाँको अनुमति बिना तपाइँको टाउको बाट एक कपाल पनि झर्दैन।
डाटा को आधारमा, यो मेरो बुझाई कोविड केस मा स्पाइक मुख्य रूप बाट हवाई निवासीहरु को यात्रा र घर फिर्ता brining को कारण हो।
@ डेबी - अमेरिका मा रहनुहोस्?! अन्तिम पटक मैले जाँच गरें, हवाई अमेरिका हो।
«पछिल्लो 123